Uthukuthele umzali womfundi oshaywe uthisha ngempama | News24
Uthukuthele umzali womfundi oshaywe uthisha ngempama
UNINA womfundi wakwa-Grade 3 oshaywe ngempama uthisha wakwesinye sezisikole ezisedolobheni laseMgungundlovu ufuna uMnyango wezeMfundo umthathele izinyathelo lo thisha.
Lo mfundi oneminyaka eyi-8 kuthiwa ushaywe uthisha ngoLwesibili olwedlule mhla zili-13 kuNdasa (March) ngoba enze iphutha ngesikhathi emakela omunye umfundi umsebenzi wasekilasini.
Ngokusho kukanina wengane ongeke aze adalulwe igama lakhe ukuvikela ingane, uthe ingane yakhe imutshele ukuthi bebenikezwe umsebenzi wase kilasini, okuthe uma sebewuqedile kwathiwa abashintshane ngezincwadi abebebhala kuzona ukuze bezomaka izimpendulo.
“Uthi yena uthole incwadi yomfundi obebhale ngesandla esingabonakali kahle wabe esemaka ukuthi impendulo akuyona ekebeni kuyiyona.
“Uthisha ube esebheka incwadi wambuza ukuthi kungani emake ukuthi impendulo akuyona nokuyilapho emushaye khona ngempama phambi kwabanye abafundi .
“Ubuye esikoleni isihlathi sibovu sivuvukele ngamuhambisa kadokotela ngoLwesithathu mhla zili-14 kuNdasa ( March) kodwa udokotela wathi awukho umonakalo odalekile. Ngibikile ehhovisini loMnyango wezeMfundo ngoba ngifuna ukuba lo thisha athathelwe izinyathelo,” kubeka yena.
Uqhube wathi kuyimanje ingane iyasaba ukuya esikoleni ngemuva kwalesi sigameko futhi ithi ayisafuni ukuqhubeka ifunde kulesi sikole.
Uphinde waveza ukuthi bekungasikhona okokuqala ukuthi lo thisha ashaye ingane yakhe ngempama.
“Ngonyaka ophelile wayishaya ngempama kodwa ayizange ingibikele, yangitshela sekudlule izinsuku ezimbili. Angikwazanga ukuthi ngihambe ngiyobika esikoleni noma kuMnyango wezeMfundo ngoba ngangingenabo ubufakazi kwazise kwase kudlule isikhathi lento yenzekile.
“Ziningi izingane zakulesi sikole ezishaywa ilo thisha ngezimpama kodwa abazali bazo bangaphumeli obala.
“Ngawo futhi unyaka ophelile kunengane eyashaywa uyena lo thisha kodwa ngathi mangibuza umzali wayo kungani engawubikeli uMnyango wezeMfundo ngalokhu wathi wahlangana nothishanhloko walesi sikole udaba seludlulile.
“Ngazitshela ukuthi lento iphelile ngeke iphinde yenzeke.”
Uthe nakuba ingane yakhe ithi ayisafuni ukufunda kulesi sikole ayikho into azoyenza njengoba unyaka usugamenxe okwenza kube nzima ukuthi ayitholele esinye isikole.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMnuz Sicelo Khuzwayo uthe umnyango usaqhuba uphenyo kanti uyakuqinisekisa ukuthi uma kutholakala ukuthi kukhona okuphambene nomthetho kunezinyathelo abazozithatha.
“Sifuna ukukubeka kucace ukuthi asihambisani nokudlame ezikoleni kungabe lubhekiswe kumfundi noma kuthisha.
“Ngeke size sikumele ukuhlukunyezwa kwezingane ezikoleni ingakho sizinika isikhathi esanele sokuphenya,” kubeka yena.
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu uSeargant Mthokozisi Ngobese uthe alikho icala elivuliwe kodwa wathi uyanxusa ukuba baye esiteshini samaphoyisa bayovula icala.